Sonke sinexesha elidliwayo, elizimeleyo, elingenasiphelo semisebenzi yasemakhaya esabelwe yona ngexesha elithile ebomini bethu. Ezi zikhundla zidla ngokukhokelela ekudakaleni nasekunyameni kwaye abafundi bafunde nto ngaphandle kwabo. Ootitshala kunye nezikolo kufuneka bahlolisise indlela kunye nokuba kutheni banike umsebenzi wesikolo kubafundi babo. Nayiphi na imisebenzi eyenziwa ekhaya kufuneka ibe nenjongo.
Ukumisela umsebenzi wesikolo ngenjongo kuthetha ukuba ngokugqiba isabelo, umfundi uya kukwazi ukufumana ulwazi olutsha, isakhono esitsha, okanye abe namava amatsha angenayo.
Umsebenzi wesikolo awufanele uququzelele umsebenzi ohlawulelwayo owenzelwa nje ngenxa yokunikezela into ethile. Umsebenzi wasekhaya kufuneka ube nenjongo. Kufuneka kubhekwe njengethuba lokuvumela abafundi ukuba benze ukudibanisa ubomi boqobo kwimixholo abayifunayo eklasini. Kufuneka unikezwe kuphela njengethuba lokuncedisa ukwandisa ulwazi lwabo lokuqukethwe kummandla.
Ukwahlukana kokuFunda kwabo bonke abafundi
Ngaphezu koko, ootitshala bangasebenzisa umsebenzi wesikolo njengethuba lokuhlukanisa ukufunda bonke abafundi. Umsebenzi wesikolo awuvumelekanga ukuba unikwe ngengubo "ubungakanani obufanayo buhambisana nayo yonke indlela". Umsebenzi wesikolo unika ootitshala ithuba elihle lokuhlangana nomfundi ngamnye apho bakhona kwaye banokwandisa ukufunda. Utitshala unako ukunika abafundi babo abaphakamileyo aphezulu amagosa enzima ngeli xesha bazalisa izikhalazo kubafundi abaye bawela emva. Ootitshala abasebenzisa umsebenzi wesikolo njengethuba lokuhlukanisa, asibona kuphela ukukhula okwandayo kubafundi babo, kodwa baya kufumana ukuba baninzi ixesha eklasini ukuzinikezela kumyalelo weqela lonke .
Khangela ukwanda kweNxaxheba kwabafundi
Ukudala izabelo ezenziwayo kunye nokwahlula umsebenzi wesikolo kungathatha ixesha elininzi lokuba ootitshala babeke ndawonye. Ngokuqhelekileyo kunjalo, umzamo ogqithisiweyo uyavuzwa. Ootitshala abanika izabelo eziqhelanisiweyo, ezahlukileyo, ezixhunyiwe emsebenzini wesikolo azibonanga nje ukunyuka kwenxaxheba kwabafundi, babona ukwanda kwenzalo yabafundi.
Le mivuzo iyakufanelekela utsalo-mali olongezelelweyo ngexesha elifunekayo lokwakha ezi ntlobo zezabelo.
Izikolo maziyiqonde ixabiso kule ndlela. Bamele banikeze ootitshala babo ngophuhliso lobugcisa obanika izixhobo zokuphumelela ekuguquleleni umsebenzi wesikolo ozahlukileyo kunye nenjongo kunye nenjongo. Umgaqo-nkqubo wesikolo wesikolo kufuneka ubonakalise le ntliziyo; Ekugqibeleni ukhokela ootitshala ukuba banike abafundi babo abafanelekileyo, abanentsingiselo, abanomsebenzi ongowasekhaya.
Umzekelo weSikolo somSebenzi weKhaya
Umsebenzi wasekhaya uchazwa njengokuba abafundi bachitha ngaphandle kweklasi ekwenzeni imisebenzi yokufunda eyabelwe. Naphi na izikolo zikholelwa ukuba injongo yomsebenzi wesikolo kufuneka ukuba isetyenziswe, isomeleze, okanye isebenzise izakhono ezifumanekayo nolwazi. Sikholelwa njengokuba uphando lubonisa ukuba izabelo ezilingeneyo ezigqityiweyo kwaye zenziwe kakuhle ziphumelela ngakumbi kunokuba zide okanye zinzima zenziwe kakuhle.
Umsebenzi wasekhaya ulungiselela ukuphucula izakhono zokufunda rhoqo kunye nokukwazi ukugqiba izabelo ngokuzimeleyo. Naphi na izikolo ziqhubeka zikholelwa ukuba ukugqiba umsebenzi wesikolo ngumsebenzi womfundi, kwaye njengoko abafundi beqolileyo bakwazi ukusebenza ngokuzimela. Ngako oko, abazali badlala indima ekuxhaseni ukugqiba imisebenzi, ukukhuthaza imizamo yabafundi nokubonelela imeko efanelekileyo yokufunda.
Umsebenzi wesikolo wasekhaya unethuba lootitshala ukuba banikeze imfundo ngabanye abajongene ngqo nomfundi ngamnye. Naphi na izikolo zibandakanya imbono yokuba umfundi ngamnye uhlukile kwaye ngoko, umfundi ngamnye unesidingo sakhe. Sibona umsebenzi wesikolo njengethuba lokwenza izifundo ngokukhethekileyo kubafundi abadibana nabo apho bahlala khona baze bazise apho sifuna khona.
Umsebenzi wasekhaya ugalelo ekwakheni uxanduva, ukuzimela, kunye nemigangatho yokufunda yonke. Injongo yabasebenzi beSchool Anywhere ukuba banikezele izabelo ezifanelekileyo, ezinengqiqo, ezinenjongo kunye neenjongo zokufunda ekhaya eziqinisa iinjongo zokufunda eziklasini. Umsebenzi wesikolo kufuneka unike abafundi ithuba lokuba bafake isicelo kwaye banwebe ulwazi olufundileyo olugqibeleleyo lwezabelo zeklasi, kwaye bahlakulele ukuzimela.
Ixesha elifanelekileyo elifunekayo ukugqiba izabelo ziyahlukahluka ngemikhwa yokufunda yomfundi ngamnye, izakhono zemfundo kunye nomthwalo wekhosi ekhethiweyo. Ukuba umntwana wakho uchitha ixesha elingenamsebenzi ukwenza umsebenzi wesikolo, kufuneka uqhagamshelane nootitshala bakho.
Iimpawu Zokufundisa Ngokuphumelelayo Udliwano-ndlebe
I-Jitters yoLuku lokuqala lweeNtsha nabaTsha beNtsholongwane
Ukuphucula iJomethry Content Isigama! Bhala izibongo!
I-Halal Ukutya: Sebenzisa iiLitha zokuSebenzisa
Lezi ziVidiyo eziMnandi zeLonely Island Music Videos
24 I-Volleyball Facts Ungazi
I-Admitti yaseMzantsi Methodist
Imibuzo Yengxoxo Yokuziqhayisa kunye nokucwasa